Senator Mark Kirk oo Puntland Booqday
Senatorkan laga soo doorto gobolka Illinois ee dalka Maraykanka waxa uu kulan albaabada u xiran yihiin la yeeshay madaxda Puntland.
Waxaa magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari ee Puntland maanta booqasho ku tegay Senator Maraykan ah, Mark Kirk, kaasoo laga soo doorto gobolka Illinois ee dalka Maraykanka iyo wafdi ka kooban 5 xubnood oo uu hogaaminayo.
Senator Kirk iyo wafdigiisa oo ka koobnaa 5 xubnood waxaa Boosaaso ku soo dhoweeyay madaxweynaha maamul goboleedka Puntland, Cabdiraxmaan maxamed Faroole iyo saraakiil ka trisan maamulkiisa.
Wafdiga ayaa booqday xarumo muhiim ah oo ku yaalla Boosaaso kuwaasoo kala ah; Bankiga, Dekedda, iyo Maxjarka xoolaha.
Booqashada ka dib waxay wafdigu kulan albaabada u xiran yihiin la yeesheen madaxweynaha maamulka Puntland Cabdiraxmaan Maxamed Faroole iyo xubno sar sare oo ka tirsan maamulka.
Senator Mark waxa uu xubin ka yahay guddiga Senateka ee dhaqaalaha, Booqashadiisana waxay u muuqataa mid indho indhayn ah, taasoo laga yaabo inay gogol xaar u tahay dhaqaalihii Maraykanka u ballan qaaday inuu ku kaalmeeyo gobollada nabadda ah ee maamullada sameystay ee dalka Soomaaliya.
Maraykanka ayaa dabayaaqadii sanadkii hore ee 2010-ka sheegay in uu siyaasad labo geesood ah kula macaamili doono Soomaaliya, taasoo dhigeysa in Maraykanku uu si gaar gaar ah ula xiriiro Dowladda federaalka, maamulada Puntland iyo Somaliland.